Wholesale SITC 3cbm musanganisi rori ine bhaketi kongiri kusanganisa auto mutoro Mugadziri uye Mutengesi |Simply
SITC 3cbm musanganisi rori ine bhaketi kongiri kusanganisa auto mutoro
Auto kudyisa kongiri musanganiswa rori 3.0cbm ine loader bhakiti
SITC 4000 Model musanganiswa rori Mabasa:
Kudyisa otomatiki, kunogona kushandiswa seforklift
Kusanganisa otomatiki kwekongiri kuitira kugona kwepamusoro
Inogona kutakura kongiri
Bvisa kongiri otomatiki uye shandisa zvakananga panodiwa
Model SITC 400 Concrete Mixer Turck Advantages:
Muchina wacho pachawo mudiki uye unochinjika, unogona kutenderera 270 madhigirii woga, unokodzera mapurojekiti ese, pasina kurambidzwa paurefu, hupamhi, nezvimwe.
Iyo tangi yekusanganisa, blade yekusanganisa uye chimiro chezvigadzirwa zvedu zvese zvigadzirwa zvine patent yakagadzirwa isu pachedu.Kongiri inomutswa inosangana neyakajairwa nyika uye chiyero cheEuropean, uye vatengi vanogona kuishandisa nechivimbo.
Zvemotokari dzemainjiniya, unogona kupinda munzira usina rezinesi plate.
Kuchengetedza basa, vanhu vaviri vanogona kushanda, vanhu vana vanogona kuita chirongwa chidiki.
1.Payment term: 100% T / T, 30% isati yagadzirwa, 70% isati yatumira 2.Packaging type: nude kutakura mumudziyo, imwe yakagadzirirwa mutoro mune imwe 20 tsoka mudziyo
3.Color: Tsvuku, Yero, yakasvibira, yebhuruu kana yakagadzirirwa
4.Warranty: 1 gore
5.Kupa kwakakodzera: 5 mazuva
6.Mutengo uchagadziriswa kana mutengo wekuchinja uchichinja kupfuura 3% (zvichienderana neUSD:RMB=1:6.45)
7.HS kodhi: 8705400000
3.0m³Kurodha kongiri yekusanganisa rori
SITC 4000 PARAMETERS
l Yakagadzirwa neItari, Otomatiki Kunzwa & kusanganisa system.
l Muenzaniso Operation.
l Yakakwira Kushanda Kugadzirwa, Nguva uye Mutengo Webasa Kuchengetedza.
l Musanganiswa rori & Inotakura Mota Yakasanganiswa pamwechete.
l Guarantee nguva 6 mwedzi.
l 180 ° Rotate Mixer mudziyo.
Model:Yuchai 4105 supercharged EURO II
Kugona, Silinda:4.3L－4cylinder mumutsetse
Kutonhodza: ​​Mvura yakatonhodzwa, Dry Air Sefa
Max simba: 85kw (116hp)
Bhatiri: 2 × 12V–80AH (272A)
Inobatsira kutungamira kweiyo induction power steering system ine yakapetwa kaviri kusimuka mutoro pamavhiri maviri ekutungamirira.
Hydraulic torque converter gearbox, hydraulic gear pombi, reverse gear control device.Dzora "kumhanya kwekushanda" uye "kukurumidza kufamba"
Nhamba yekutanga: 0–5km/h
Nhanho yechipiri: 5–15km/h
Chikamu chechitatu: 15-30km/h
Mavhiri mana anodhiraivha, vhiri padivi kumhanya anoderedza, giya rekudzikisa, flange yekubatanidza kumhanya.
Mushure mebhiriji, swing (+ 28 madhigirii), iyo bhiriji yekumisikidza yepasiredhi giya rekudzikisa giya.
Tire:… 16-70-22.5PR,Max mutoro: 13000kg, 1680kPa
Iyo yemukati vhiri mhando sevhisi mabhureki uye yekukurumidzira mabhureki anoshandiswa pamavhiri mana, uye diki servo pombi pane yakazvimirira kaviri seketi inoshandiswa.Negative pressure type yekupaka brake, front axle configuration yemukati hub.
"Self-Priming" 24V pombi yemvura
Matangi maviri emvura ane kubatana uye kugovera hama, kugona …………………2*410L.
Kuburikidza neiyo electromagnetic kuyerera mita uye yekushanda kamuri inoratidzira pane inopinza yemvura yekudyara yedhiramu yekudzora.
Inogona kugara padivi pechigaro chemutyairi kuti igonese pombi.
Mota yekutsvaira ine high pressure water pump
Kaviri koni dhiramu ine kaviri spiral inobvongodza screw uye convex pasi.
Drum inotenderera kumhanya:…………………17rpm
Concrete Output: ……………..3.0m³/container
"Heavy" spherical saddle force frame frame inogona kuiswa 180 degrees uye hydraulic rotation, automatic locking ne hydraulic brake.Iyo roller inotenderera kuburikidza nepombi yegiya uye hydraulic mota munharaunda yakavhurika, iyo ine bhuku remagetsi valve muimba yekushanda uye kumashure kwemusanganisi.
Iyo chute inobviswa inogona kuvimbisa zvakananga kuburikidza nekuburitsa hopper.Sezvo iyo yakajairwa gadziriso inopa 1 chute yekuwedzera.
Gear pombi: Brand / American pike
3 chidimbu chibatiso chakawanda basa rekudzora lever.
Aluminium heat exchanger yekutonhodza hydraulic mafuta.
Yakavharwa inlet mafuta, inogona kutsiviwa neyekunze hydraulic oiri sefa.
Mutoro uye Kudyisa
Ruoko rwekurodha rwakashongedzerwa neotomatiki kuyera sensor, kaviri acting kurodha mudziyo uye reset oiri silinda, uye manual control feed port ine yakajairwa yekukurudzira basa.
Kurodha nguva pakuzara:……….6nguva
Imba yekushanda yakavharwa ine yekudziya / kutonhora sisitimu, yakarerekera kumberi hwindo.
Zvigaro zvemunhu, zvigadziriso zve flexible kumiswa uye kureba kugadzirisa basa.
Tangi remafuta: …………………………….. 300L
Hydraulic mafuta: ………………………… 200L
Mafuta ekuzora:…………………………… 16L
Mutoro mukuru: ……………………… 10000kg
Zvakapfuura: 1cbm otomatiki feed kongiri musanganiswa rori ine loader bucket
Zvinotevera: Auto feeding kongiri musanganiswa rori yakaiswa loader
2cbm flat kongiri musanganisi
3cbm hombe kugona mhando nyowani yekuzvitakura conc ...
Yakanyanya Kubudirira Self Loading Concrete Mixer kushandisa...
Fekitari inotengesa simende rori ine mixer kongiri m...
1cbm otomatiki kudyisa kongiri kusanganisa rori ine loader b ...
SITC3200 2.0CBM Auto feeding mix rori ine 180...